Dowladda oo mamnuucday isku imaatinka xilli musharixiinta ku dhawaaqeen bannaabax – Banaadir Times
Wararka Howlgalka AMISOM oo muddo kordhin loo sameeyay
QM oo war kasoo saartay heshiiskii ay wada gaareen Midowga Musharaxiinta iyo xukuumadda xil gaarsiinta
Dowladda oo mamnuucday isku imaatinka xilli musharixiinta ku dhawaaqeen bannaabax
By banaadir 23rd February 2021 22 No comment
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa markale sheegay in dowladda Soomaaliya marnaba ogolaneyn isku imaatin, xilli kiisaska cudurka Coronavirus ee Soomaaliya uu kordhay.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in dowladda ay mas’uul ka tahay dadka Soomaaliyeed badbaadadooda, isla markaana siyaasi dano gar ah leh uusan isku soo bixi karin waa sida uu hadalka u dhigay.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe oo ka qeyb-galayay Barnaamij looga hadlayay xaaladda dalka ayaa sheegay in Go’aankii dowladda Soomaaliya ku mamnuucday isku imaatinka uu yahay sidiisii dadna isku imaan karin.
Ugu dambeyn Wasiirka waxaa uu sheegya in dowladda Soomaaliya ay ogoshahay in siyaasiyiinta ka aragtida duwan uu mid walba tago tv-yada ka howlgalla dalka, halkaasna uu kusoo bandhigo aragtidiisa.
Hadalka Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa kusoo aadaya xilli Midowga musharixiinta ay markale ku dhawaaqeen dibadbax Jimcaha soo socota oo taariikhdu tahay 26 Febaraayo lagu qabanayo Taalada Daljirka Daahsoon ee degmada Boondheere.
Jubbaland oo faah faahisay shuruudaha ay ku xireen ka qeyb-galka Shirka Muqdisho
Ra’isul Wasaare Kheyre iyo Wafdi uu horkacaayo oo Garoowe Lagu soo Dhaweeyay(Sawirro)
Jubbaland oo dalbatay in Farmaajo uusan door ku yeelan hanaanka doorashada